Lindows yakadzoka neLinspire 7.0 uye Freespire 3 | Linux Vakapindwa muropa
Lindows yakadzoka neLinspire 7.0 uye Freespire 3
Vamwe venyu mucharangarira kugoverwa kunozivikanwa Lindows, Linux distro iyo yakakonzera hombe nyonganiso nekuda kwezita rake kare iyo yakafanana yakafanana interface yaive yakafanana neWindowsNekuda kweizvozvo, akawana yakakura nhevedzano yekushoropodzwa uye zvinodiwa kubva kuvanhu veMicrosoft.
Mukuwedzera kuna Richard Stallman achishoropodza izvi yekuve sisitimu yaida kuti mubhadharo ugovaniswe uye kushandiswa kweiyo isina-mahara software mairi.
Nekuda kweizvi Akange asina imwe sarudzo kunze kwekushandura zita rake kuenda kune raakatora naLinspire, kunyangwe nguva pfupi yapfuura chirongwa ichi chavharwa uye chakasiiwa kumagumo.
Nguva yakafamba uye mutsva mutsigiri akabuda uye PC / OpenSystems LLC yakafunga kutangazve chirongwa ichi uye iri nenzira iyo Linspire yakazvarwa patsva.
Kune avo vasingazive Linspire Ini ndinogona kukuudza kuti ndezve yakakwana yekushandisa sisitimu yakavakirwa paUbuntu uye ichipa iro simba, kugadzikana uye mari inochengetwa yeLinux nekureruka kwenzvimbo yakafanana neWindows.
LinspireOS ndeye 64-bit Ubuntu-based uye chikamu cheDebian-based operating system inoitirwa bhizinesi, dzidzo, uye mushandi wehurumende. Iyo ine zvese zvinoshandiswa izvo vashandisi vebhizinesi vachazoda kushanda, kutsvaga, uye kuendesa kune akanyanya-magumo desktop masisitimu.
Uye zvakare, Linspire ine yakasarudzika Click-N-Run (CNR) tekinoroji inoita kuti software isungiswe paLinspire nekukurumidza uye nyore.
2 Chii chitsva muLinspire 7.0 uye Freespire 3
3 Nzira yekuwana sei Linspire 7.0 uye Freespire 3.0?
Iyi yaimbove nharaunda-inotarisirwa kugoverwa kweLinux inotsigirwa neLinspire.
Freespire yakagumiswa muna2008. Kubva muna 2017, Freespire rave remahara mashandiro ehurongwa anoenderana neUbuntu uye akagoverwa nePC / OpenSystems LLC. Freespire inoshandisa iyo Xfce desktop.
Kusununguka Iko kugovera kunoitirwa nharaunda yeLinux mune zvese, iyo inoshandisa chete yakavhurwa sosi yezvinhu, hadzina mafomu ekushandisa.
Asi izvi hazvireve kuti kune muganho, nekuti kuburikidza neakawanda software software uye zvinyorwa, vashandisi veFreespire vanogona kuisa chero application yavanoda.
Chii chitsva muLinspire 7.0 uye Freespire 3
Neichi chitsva kuburitswa kweshanduro nyowani dzeaya maLinux kugoverwa nemapakeji akagadziridzwa uye maficha. Kuburitswa kutsva, Linspire 7.0 uye Freespire 3.0, yakavakirwa paUbuntu.
Kunyange zvakadaro zvese zvine musimboti uye zvinoshandiswa zvakafanana, Vanonanga mabhesi maviri akasiyana evashandisi.
Freespire ndeye yemahara uye yakavhurwa yekuparadzira kugovera, inobvumidzwa pasi peGNU GPLv2 marezinesi uye musanganiswa wemamwe marezinesi senge BSD License. Mamwe emapakeji esoftware akaiswa mune yekuchengetera ane marezinesi pasi peGNU GPLv3.
Padivi pake apo Freespire iine zvinotevera maapplication uye maficha:
Firefox Quantum Webhu Bhurawuza
Geary email mutengi
Graphics Chishandiso Pinta
Font Manager uye nezvimwe.
Uye apo Linspire 7.0 ine zvinotevera zvinoshandiswa uye zviwanikwa:
Thunderbird ine Karenda
MS Exchange uye Google Sync
Iyo ine waini yekubatanidza kumhanyisa mamwe maWindows application, VirtualBox, XFS, JFS, ZFS, BTRFS rutsigiro, .NET Core rutsigiro, ClamAV Virus Scanner, Bleachbit, kupindirana kwekutsvaga system, uye yakasanganiswa yekuvaka nharaunda.
Nzira yekuwana sei Linspire 7.0 uye Freespire 3.0?
Linspire inzira yekubhadhara, saka Kana ivo vachida kuiwana vanozviita mukuchinjana nemari shoma ye $ 29 USD uye kana vachida kuve nerutsigiro kwemwedzi gumi nemaviri mubhadharo unowedzera kusvika kumadhora makumi matanhatu emadhora. Nezvo, Linspire muenzaniso wakajeka wepurogiramu yakavhenganiswa iyo inotova nehuviri hweyakavhurika uye yakavharwa sosi mukuwedzera kune ayo emahara uye epamutemo marezinesi.
Kune rumwe rutivi, Freespire ndiyo yemahara Linspire imwe sarudzo izvo tinogona kuwana kubva pane zvinotevera link kuti ukwanise kuyedza kana kuiisa pamakomputa edu.
Kunyangwe kana vachizozvida yenzvimbo yekutengesa, inogona kuvandudzwa pamadhora mashoma emadhora gumi nemashanu emadhora.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Lindows yakadzoka neLinspire 7.0 uye Freespire 3
linspire ... vamwe vakaita satsvuku ngowani uye suse ... uye iwe unoziva kuti linspire inobhadharwa, kwete zvakadaro freespire ... asi yakanyanya yakafanana shit
tsvuku ngowani -> fedora
suse -> vhura suse
ivo vanongofambisa mari uye votisiira ivo "lite" shanduro dzemashandisirwo avo masystem. Ivo vanotiudza kuti isu tinotora yavo software kuti igadzikane asi kazhinji isu tiri marabhoritari makonzo uye neruzivo uye notupukanana zvakashumirwa mahara ivo vanovandudza yavo yakabhadharwa software.
Pindura ku xep
Vaida kunyengedza vanhu neClick-N-Run system yavo iyo maererano navo yakashandura Linux ikaita Windows uye ndozvakashata zvaitika apo vanhu vakaona kuti ichiri Linux isina Mahara Windows, mazuvano neSoftware Center uye Snapcraft yaisanganisira mune akawanda maLinux anogovera, hapana chikonzero chekubhadhara iyo Click-N-Run.
Yemahara software, kana hazvo kana inosungirwa, inofanira kunge iri yemahara. Zvakare, ivo vatoita nhamburiko yekugadzira, kukudziridza nekuichengeta, kune isingasviki mubhadharo wakanaka uye unodhura.
Wekan: kunyorera kwe manejimendi ekugadzira kuyerera
ProjectLibre: yakavhurwa sosi chirongwa chirongwa manejimendi